”Jawaabtaasi gabar yar kuma habboona” – Bonucci oo la waydiiyay wixii Juve kasoo waday! – Gool FM
”Jawaabtaasi gabar yar kuma habboona” – Bonucci oo la waydiiyay wixii Juve kasoo waday!
(Milano) 14 Dis 2017 – Leonardo Bonucci ayay gabar yari waydiisey sababta ku xambaartay inuu Milan usoo waydaarto kooxdiisii hore ee Juventus oo uu 7 sanadood ku qaatay, kaddi markii ay arrintani filanwaa ku noqotay bahda Serie A ka tegistiisa Bianconeri.
“Haatan un baan bilaabayaa inaan funaanaddan ku ciyaaro, lkn inaan xirto oo aan misna koobab ku qaado, waa tikit taariikheed,” ayuu Bonucci ku bilaabay mar uu ka qayb gelayay munaasabad ay Milan qabsatay.
Markii ay gabadha yari ku adkaysay inuu si mucayin ah u carrabaabo sababta uu uga soo tegey Juventus wuxuu ku af gobaadsadey.
“Aan iska niraahno jawaabtu kuma haboona gabar yar, nolosha xiriiradu way bilowdaan wayna dhamaadeen, balse waa go’aan aynu wada gaarney labadeennu (Juve iyo isaga), isla markii ay soo baxday fursadda Milan waxaan ku qabsaday labada gacmood.” ayuu yiri Bonucci oo sidoo kale u mahad naqay Marco Fassone iyo Massimiliano Mirabelli.
HUBAAL: Horyaalka Faransiiska oo fasal-ciyaareedka xiga hirgelin doona hannaanka VAR
Ronaldinho oo ku biiraya siyaasada dalkiisa Brazil (Halkee ayuu ka galayaa siyaasada?)